ချစ်ကြည်အေး: ပုံပြင်အသစ် (သို့) ရင်ကွဲနာအား စာစီခြင်း
ပုံပြင်အသစ် (သို့) ရင်ကွဲနာအား စာစီခြင်း
ကျွန်မယဉ်သူမေဟာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်….။ ဒီတော့ မောင်က ကျွန်မအတွက် ရေးချွတ်စရာ ဇာတ်လမ်းလိုပေမယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်လိမ့်မယ်….။ အဲဒီအထင်နဲ့ မောင်က ကျွန်မကို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ပေးခဲ့တယ်။ မောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပုံပြင်အသစ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ကျွန်မ အခု ရေးတော့မယ်။
“ကိုယ် အိပ်မက် မက်တယ်။ သိလား….အိပ်မက်ထဲမှာလေ မေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ၊ ကလေးတွေဘာတွေတောင် ရလို့…..။ ပြီးတော့ မေ စာရေးနေတဲ့နောက်ကနေလာပြီး မေ့ကို သိုင်းဖက်လိုက်သေးတယ်”
“ကိုယ် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ထုတ်ဝေခွင့်ရချင်တယ်။ မေ့နာမည်နဲ့ လေ။ မေရေးတဲ့စာတွေချည်း ထည့်ပစ်လိုက်မယ်”
ဟင့်အင်း တော်ပါတော့။ မတွေးနဲ့တော့။ မတွေးပါနဲ့တော့။ အိပ်ရအောင်ပါနော်….။
အိပ်ဆေးပုလင်းထဲက ဆေးတစ်ပြားကို ရေအေးတစ်ခွက်နဲ့ သောက်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်မက အိပ်စက်ခြင်းကို ညတွေဆီက မျှားယူနေရသူ။ ဇီဝဆေးပြားတွေရဲ့ အကူနဲ့လေ….။
ညက မှောင်နေလိုက်တာ။ ညအမှောင်ထဲမှာ ကြယ်စင်ကလေးတွေလို မောင့်မျက်ဝန်းတွေက ဟိုမှာ ဒီမှာ၊ ကျွန်မနဲ့ နီးလာလိုက်၊ ဝေးသွားလိုက်…..။ ပြတင်းပေါက်ကတစ်ဆင့် ဖြာကျနေတဲ့မီးရောင်တွေက ကျွန်မအခန်းထဲ တိုးဝှေ့နေရာယူထားကြ။ မှောင်နေတုန်းပါပဲကွယ်။ မလင်းဘူး မောင်…. ကျွန်မရင်ထဲမှာ….။
ကျွန်မသိချင်တာတွေကို ပြောပြပါဦး မောင်ရဲ့….။ ကျွန်မက အမေးအမြန်းထူ တယ်နော်….။ မောင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ဘာမဆို သိလိုက်ချင်တာပဲ….၊ ကျွန်မ မေးခွန်းတွေ မေးတိုင်းလည်း မောင်က အမြဲခေါင်းကုတ် စိတ်ရှုပ်နေကျ။ ကျွတ်….။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ကျွန်မ စိတ်ပျက်မိပါရဲ့။
ကုတင်ဘေး ခုံပေါ်က ကျွန်မဖုန်းကလေး။ အဲဒီထဲမှာ…..။ မောင် ရှိနေတယ်။ မောင့်ပုံရိပ်၊ မောင့်အသံ၊ မောင့် စကားတွေ….။ မောင်နဲ့အတူ ဆိုညည်းခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းတွေ….။ မောင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ။
"မောနင်း…နေကောင်းလား၊ ခု အပြင်မှာ သိပ်ပူနေတာပဲ၊ ခဏနေရင် ကိုယ် အပြင်ထွက်တော့မယ်။ နောက်နေ့မှ တွေ့မယ်နော်၊ အချိန်ရရင် ဖုန်းခေါ်လိုက် I miss u အိုကေ Muahhh….."
မျက်ရည်တွေတစ်စက်ချင်း တစ်စက်ချင်း ကျွန်မပါးပြင်ပေါ်…. လိမ့်ဆင်းကျလာ။ ခဏကလေး နေပါဦး။ နေပါဦးလား မောင့် အသံလေးရယ်။
အသံသွင်းဖို့အတွက် ဖုန်းရီကော့ဒ်ဒါကို ဖွင့်လိုက်ရင်း မောင့်ဆီကို စကားတွေ တစ်လုံးချင်း စပြောလိုက် တယ်။
"မောင် နေကောင်းလား ဟင်။ ခုလေ ကိုယ် ဖျားနေတယ် သိလား။ နေ့လည်က ရေပန်းကိုအားကုန်ဖွင့်ပြီး ရေချိုးတယ်။ အကြာကြီးပဲ၊ ပြီးတော့ မောင့်ကို လွမ်းလွန်းလို့ အော်ငိုမိတယ်။ ဘယ်နှနာရီမှန်း မသိဘူး။ ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်း မသိဘူး။ သတိဝင်လာတော့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေ ခိုက်ခိုက်တုန်နေခဲ့ပြီ။ ခေါင်းအစိုကြီးကို ဒီအတိုင်း မသုတ်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်တာ၊ ရေစက်လက်နဲ့လေ။ ခု အဲကွန်းကို ၂၇ မှာ ထားတာတောင် အင်္ကျီဘောင်းဘီ အရှည်ဝတ်ပြီး စောင်ခြုံထားရတယ်၊ သိလား။ ဆေးတော့ မသောက်ချင်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဖျားနေတယ်ဆိုရင် မောင် စိတ်ပူမလားလို့။ အကြာကြီး ဖျားကြည့်ချင်သေးတယ်။ ဒါပဲ မောင်ရယ်…..။ လွမ်းလိုက်တာ မောင်ရာ…..။ နေကောင်းအောင် နေနော်"
ပြီးတော့ send ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးနှိပ်လို့ မောင့်ဆီ ပို့လိုက်တယ်။ မတတ်နိူင်ပါဘူး….။ ကျွန်မစိတ်တွေကို ထိန်းမထားချင်ပါဘူး မောင်။ မောင့်ကို ကျွန်မ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း မောင် သိနေတာပဲဟာ။
"I Luv u…."
ဟော မောင့်အသံ ကြားရပြန်ပြီ။ မောင်က ချစ်တယ်လို့မှ မပြောခဲ့တာဘဲနော်။ ကျွန်မ ဘာသာပြန်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း….မောင် ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ရှိစေ…..။
ဟင်….မနက် မိုးလင်းတော့မှာလား။ အိပ်မှ….အိပ်ဖို့ကြိုးစားမှ….။
မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ ကျွန်မက စာရေးဆရာမ တဲ့။ စာရေးမှပေါ့။ ခုလို အချစ်ကြောင့် ရင်ကွဲနာကျ၊ ဘဝမှာ အလူးအလဲ ဒဏ်ရာရ၊ နာလန်မထူနိူင်တဲ့ဘဝတော့ အရောက်မခံနိူင်ပါဘူး။ ထ ထ…ထဦးမှပါ။ မနက် ငါးနာရီတောင် ရှိပေါ့။ လမ်းလျှောက်မယ်။ ပြန်လာရင် ရေချိုး။ မနက်စာ စား။ စာရေးစားပွဲထိုင်၊ ရေးစရာ ရှိတာရေးမှပေါ့။
နေပါဦး။ ဘာရေးရမှာပါလိမ့်။ မိန်းကလေးတွေ အချစ်ကြောင့် ဘဝကို အရှုံးမပေးကြဖို့။ အချစ် အလွမ်း ရင်ကွဲနာတွေနဲ့ အချိန်ကုန် လူးလှိမ့်မနေကြဖို့။ ဘဝအားမာန်ပါတဲ့ စာမျိုးတွေ ရေးမှ။ ဟုတ်ပြီ။ ချမယ်။ အဲဒါမျိုး ရေးရမယ်။ ကြက်စွပ်ပြုတ်လို အားရှိသွားစေမယ့်စာမျိုးနဲ့ နိူင်ငံ့အကျိုးပြုစာပေတွေ ရေးမယ်။ ဟုတ်ပြီ အိုခေ…။
"ဒီနေ့ ဆံပင်သွားညှပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်လားဟင်။ နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ ဆံပင်အရောင် ပြောင်းဆိုးမယ် စိတ်ကူးတယ်။ ခဏနေရင် ဘာဘယ်တီး သွားသောက်မယ်။ လိုက်မလား။ သြော်….မနေ့ညက ညစာ အိမ်မှာ ချက်စားလိုက်တယ် သိလား။ ဝက်နံရိုးချက်စားတယ်လေ၊ ဂွတ်ပဲ။ ဒါပဲနော် မနက်ဖြန်မှ တွေ့ကြမယ် တိတ်ကဲ မွ….."
စကားတွေ လာပြောနေပြန်ပြီ။ မောင်…..။ တိတ်တိတ်လေး နေစမ်းပါ မောင်ရဲ့….။
မောင်ရာ….ဘာလို့လဲ…။ ဘာလို့လဲ ဟင်….။ ကျွန်မနဲ့ အဝေးမှာ နေရရင် ပိုစိတ်ချမ်းသာမယ်ပေါ့ မောင်က အဲသလို ထင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ ကျွန်မနဲ့ မခွဲနိူင်ဘူး၊ လွမ်းတယ် ဆို……။ ကျွန်မနဲ့အတူ မိသားစုဘဝလေးတစ်ခု မောင် ဖန်တီးမျှော်လင့်ကြည့်မိတယ် ဆို…။ ဘာလို့များ….။
မျက်ရည်တွေ….ကျလာပြန်ပြီ။ ဒီမျက်ရည်တွေဟာ…ခဏခဏကျနေတာပဲ။ သူတို့ကြောင့် မျက်ရည်နာမည်ပျက်ရတယ်။ တန်ဘိုးမဲ့ရတယ်။ ခဏခဏငိုနေတော့ မောင်က စိတ်ကုန်လို့ ထားခဲ့တာပေါ့။ ဒင်းတို့ကြောင့်….။ မောင် စိတ်ပျက်ပြီး အဝေးကြီး ထွက်သွားတာ…..။ မောင်က ပျော် ချင်တာ…။ မောင်က ပျော်ပျော်လေး နေချင်တာ။ ရယ်မောပေါ့ပါးနေချင်တာ။ အကြင်နာတွေ အယုယစကားတွေပဲ ကြားချင်တာ။ နားမလည်နိူင်မှုတွေ၊ ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ စိမ်းတောက်နေတဲ့ စကားတွေ၊ မလိုတမာ စကားနာတွေ၊ စိတ်နာငိုညည်းသံတွေ မောင်က ကြားချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မသိဘဲနဲ့…။ ခုတော့ မောင်က စိတ်ကုန်သွားပြီတဲ့…..။
ကျွန်မက သိပ်ချစ်လို့ပါ မောင်ရဲ့။ မောင့်ကို အချိန်တိုင်း သတိရနေသလို၊ မောင့်အပေါ် ကျွန်မစိတ်နှလုံးအစုံ ပုံအပ်ထားသလို မောင့်စိတ်အစဉ်ကိုလည်း ကျွန်မပဲ ပိုင်ချင်ခဲ့တာ။ မောင်က ကျွန်မကို နားမလည်ဘူး။ မောင့်ကို ကျွန်မက နားမလည်ဘူး။ မောင့်ကိုယ်မောင်လည်း နားမလည်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မလည်း နားမလည်ဘူး။ အလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့။ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ…..။
မောင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေရဲ့ ပုံကို လိုက်ခ်လုပ်ခွင့် မရှိရလို့ ကျွန်မက ပိတ်ပင်တော့ မောင် စိတ်တိုသွားလိုက်တာ။ ဟီဟိ….ရယ်ရတယ်။ မောင်က ကလေးလိုပဲ၊ ကျွန်မကို စိတ်ကောက်လို့ကောင်းနေတော့တာ။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအကြီးကြီးနဲ့ ကျွန်မကို ပစ်ပေါက်တယ်။
ကျွန်မ ပြုံးမိတယ်။ မောင့်ကြောင့် အူတိုမိတဲ့အဖြစ်တွေကလည်း ပေါပါ့။ မောင်ကလည်း ကျွန်မ အူတိုတိုင်း စိတ်ကောက်ပါ့။ ချစ်စရာကလေးရယ် မောင်က….။
ထ ထတော့လေ၊ လုပ်ပြန်ပြီ။ ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့။ ဒီလို ပျော့ခွေနေပုံမျိုးနဲ့ ခွန်အားရှိတဲ့စာတွေ ဘယ်လိုရေး မှာလဲ။ အိပ်ရာထဲမှာ ခွေနေလို့ မဖြစ်သေးဘူး။ မျက်ရည်တွေနဲ့ အိပ်စက်၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ နိူးထနေရတဲ့ ကျွန်မကမ္ဘာမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ကျဆုံးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ရတော့မလား။ ငိုဖို့တောင် အင်အား မရှိတော့တဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့….။ အရောင်မဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့….။ အားတင်းထားလည်းပဲ ပြိုပြိုကျနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့….။ ဘဝကို ဘယ်လိုခွန်အားမျိုးတွေနဲ့ ပြန်လည်ထူမတ်ရတော့မှာလဲ။ စိတ်ညစ်လိုက် တာ။ ခက်တာက နားထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး ကြားနေရတဲ့ မောင့်အသံတွေ…..။
မောင့် အ သံ တွေ…..
"ခု ဘာမှ မစားရသေးဘူးလား၊ ပန်းသီးရှိလား၊ ပန်းသီးတစ်လုံးလောက် စားလိုက်....."
"ကောင်းကောင်း စား၊ ကောင်းကောင်း အိပ်၊ နေကောင်းအောင်နေ နော်၊ လူက ဖြူဖျော့နေပြီ"
"ပန်းချီတွေလည်း သိပ်ဆွဲမနေနဲ့၊ တော်ကြာ နာမည်တွေ ကြီးကုန်ဦးမယ်...."
အိပ်ရာဘေးစားပွဲပေါ်က နိူးလာရင်စားဖို့ထားထားတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကို နံရံဆီ အားကုန် ပစ်ပေါက်လိုက်တော့ ပန်းသီးစတွေက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပေပွ ကြေမွ….။ မကြားချင်ဘူး….။ အဲ့ဒီအသံတွေ….။ မောင့်အကြင်နာတွေက ခုတော့ လူသတ်လက်နက်တွေအဖြစ် ပြောင်းသွား...။ ကျွန်မကို ဝိုင်းသတ်နေကြ။
မစားဘူး။ မအိပ်ဘူး။ နေကောင်းအောင်လည်း မနေဘူး။ သေသွားရင် ကောင်းမယ်….။ သေပဲ သေချင်တယ်….။ ဒါပဲ။
ဟင့်အင်း….။ ကျွန်မစိတ်တွေ ကျောက်ချရာ…။ ကျွန်မအာရုံတွေ ကျက်စားရာ ပန်းချီကားတွေထဲမှာပဲ ကျွန်မစိတ်ရှိသလို နေနိူင်တာ….။ ခွင့်ပြုပါ နော်…။ မောင် ခွင့်မပြုလည်း ကျွန်မက ဆွဲဦးမှာ။
နားတွေကို ပိတ်ထားလိုက်မိတယ်ထင်ရဲ့....။ တော်လောက်ပါပြီလေ...။
"အချစ်ဆိုတာကို ဘယ် တုန်း က မှ မယုံကြည်ခဲ့ဘူး။
အချစ်ဆိုတာမှာ ဘယ် တုန်း က မှ မညွတ်ပျောင်းခဲ့ဘူး။
ကျွန်မ အချစ်ဝတ္ထုတွေ ရေးပါတယ်......
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပုံသွင်းခံရတဲ့ အကျင့်တစ်ခုမျှသာ။ အကျင့်ကနေ အစွဲအလန်းဖြစ်.....။ အစွဲအလန်းကနေ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ တမ်းတခြင်းတွေဖြစ်လာ....။ ဒါကိုပဲ အချစ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်......ရူးကြတော့တာ။
တမ်းတခဲ့ဖူးတယ်....။ ကျွန်မ ရူးခဲ့ဖူးပါတယ် မောင်နဲ့ကျမှ..."
နောက်ထပ်အသံဖိုင်တစ်ခု သွင်းပြီး မောင့်ဆီ ပို့လိုက်မိပြန်တယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ မောင်။ ငိုသံတွေ ပါသွားတယ် ထင်ရဲ့။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မ ငိုနေလို့ပါ။ မောင့်ကို လွမ်းလို့ပါ….။ ရင်တွေ နာကျင်ရလွန်းလို့ပါ။
တော်ပါပြီ။ ခု အပြင်မှာ နေ့လား၊ ညလား…။ ကျွန်မ မသိနိူင်တော့တာပဲ။ အိပ်ချိန်လား၊ စားချိန်လားလည်း ကျွန်မ မသိနိူင်တော့။ ရင်ကွဲနာဆိုတာ တကယ်ပဲ ရှိသလား။ ရင်ကွဲတဲ့အခါ သေတတ်သလား။ ရင်ကွဲသေတဲ့အခါ လှလှပပလေး သက်သက်သာသာလေး သေနိူင်မှာလား။ သိချင်လိုက်တာ။
တော်ပါပြီ စာရေးမယ်။ အချစ်ကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ဘဝပျက်အောင် မခံစားကြဖို့။ အချစ်ဟာ ဒင်းတို့ယောကျာ်းတွေအတွက် ဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်းမျှသာဆိုရင် ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေ အတွက် မြေမှုန်တပွင့်မျှသာဆိုတာ သိစေရမယ်။ မျက်ရည်တွေကို ခု သုတ်လိုက်၊ သုတ်လိုက်စမ်း၊ သုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ။
မောင်ပေးခဲ့တဲ့ ရင်ကွဲနာကို ကျွန်မ စာဖွဲ့နေပြီ။ ပြီးသွားတဲ့အခါ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တစ်ခုကို သွားပို့ရဦးမယ်။ မောင့်အကြောင်းလို့ မောင် မရိပ်မိအောင် ပိပိရိရိရေးထားတဲ့စာကို မောင်ဖတ်မိတဲ့အခါ ရယ်များ ရယ်မောနေမလားပဲ။ ရယ်ပါ မောင်၊ မောင်ရယ်လိုက်တဲ့အခါ ချစ်စရာကောင်းလို့ ကျွန်မ ချစ်တယ်။
တစ်ခုပဲ မောင့်ကို ကျွန်မ လွမ်းမနေဘူးလို့ ရေးမယ်။ မောင်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာ ကျွန်မ ရပ်တန့်မနေဘဲ အားကောင်းမောင်းသန်မိန်းမသားပီသစွာ ဘဝခရီးကို တစ်ယောက်ထဲ ဆက်လျှောက်ဆဲ၊ တစ်နေ့မှာ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရမယ့် အာဂမိန်းမ ကျွန်မဖြစ်တယ် လို့ ရေးဖွဲ့မယ်။ အချစ်ကြောင့် လမ်းပျောက်နေတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတွေရှေ့က မားမားရပ် လမ်းပြပေးချင်တဲ့ မိန်းမအဖြစ် စာစီမယ်။
ကျွန်မယဉ်သူမေဟာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်….။ ကျွန်မအတွက်တော့ ရင်ကွဲနာဟာ စာတစ်ပုဒ်မျှသာ ဖြစ်တယ်။
september rainbow Tue Dec 03, 06:54:00 PM GMT+8
ရိုးမ အရိုင်းပန်း Tue Dec 03, 06:56:00 PM GMT+8
အမ ချစ်... comment ပေးလို့ရပါပြီ
ချစ်ကြည်အေး Tue Dec 03, 07:01:00 PM GMT+8
ရွှေအိမ်စည် Tue Dec 03, 07:02:00 PM GMT+8
Ma Tint Wed Dec 04, 11:47:00 AM GMT+8
မချစ်ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ စီကုံးထားတဲ့ မောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖတ်သွားတယ် ...
မိုးငွေ့........ Wed Dec 04, 04:59:00 PM GMT+8
အရေးအသားတွေက အသက်ဝင်လွန်းလို့ ဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာမဖြစ်သွားတယ်..။